5 Ihe ngwaike ngwaike nke anyị nwere ike iji Lego rụọ | Akụrụngwa n'efu
5 Ihe oru ngwanrọ na-akwụghị ụgwọ nke anyị nwere ike iji Lego rụọ
Joaquin Garcia Cobo | | mmụta, Nkọwa 3D, Robotics
Free Hardware aghọwo ụdị nke ngwaike na-esiwanye ji na ina. Ihe kpatara nke a bụ na ọnụ ala ya na ngwanrọ dakọtara bara ụba na-eme ka ọ dịrị onye ọ bụla. Otu ihe a na - eme na Lego iberibe, ihe egwuregwu ụmụaka ama ama ama ama nke na - eme ka ọ dịrị n’ọtụtụ ụlọ ma nwekwa ọnụ ala dị ala nke mere na ndị na - anaghị eji egwu egwu egwu egwu, anyị nwere ike zụta ụdị mpempe a.
Ọzọ anyị ga-ekwu maka ya 5 Ihe akụrụngwa na-enweghị ego anyị nwere ike ịmepụta ma jiri ekele maka Lego. Maka nke a, anyị ga-amalite na mpempe Lego nke anyị nwere ike ịchọta n'ụlọ na ụlọ ahịa ọ bụla, mana maka ọrụ ọ bụla a anyị ga-achọkwa ihe ndị ọzọ dị ka bọọdụ Arduino MEGA, bọọdụ Raspberry Pi, ọkụ LED ma ọ bụ ihuenyo LCD. Ihe niile ga-adabere n'ụdị ọrụ anyị chọrọ ịrụ.
1 Rasberi Pi ikpe
2 Igwe ọkụ jikọtara ọnụ
3 Igwefoto foto
4 Robot a na-eme n'ụlọ ma ọ bụ mmiri
5 Onye na-ebi akwụkwọ 3D
6 Ndi obu nani ha bu oru ngo?
Rasberi Pi ikpe
O nwere ike ịbụ oru kacha ochie na nke a kacha ewu ewu na brik Lego (na-enweghị n'uche ụlọ ụmụaka). Ọ bụ na proyect mepụta ụlọ dị iche iche iji kpuchido ma kpuchie mbadamba Pipe. Amụrụ ya bụ n'eziokwu na onye okike chọrọ nkwado iji chekwaa ma nwee ọtụtụ bọọdụ Rasberi Pi. N'oge na-adịghị anya a chọpụtara na mpempe Lego nwere ike ịba okpukpu abụọ dị ka nnukwu okwu maka mbadamba Pipe Pi. ma ọ bụ ụdị SBC ọzọ ọ bụla nakwa dị ka ịbụ ezigbo nkwado maka ụfọdụ ọrụ.
Na ụkpụrụ, anyị nwere ike jiri mkpokọta Lego rụọ mkpo dị n'ụdị achọrọ nke anyị chọrọ mana anyị nwere buru n'uche oghere efu anyị ga-ahapụ iji mee njikọ site na ọdụ ụgbọ mmiri nke Raspberry Pi.
Ọ bụrụ na anyị achọghị iwu okwu a ma ọ bụ na anyị chọrọ iji Lego iberibe maka ọrụ ọzọ, anyị nwere ike ịzụta ikpe ahụ mgbe niile site na ụlọ ahịa dị n'ịntanetị dị ka Amazoni. Anyị nwere ike ịnweta okwu a mara mma maka ọnụahịa yiri nke ikpe gọọmentị na dabara adaba maka ụdị Rasbperry Pi.
Igwe ọkụ jikọtara ọnụ
The oru ngo nke ike ọkụ ọkụ bụ ihe mbụ na agwakọta na-enwe a mara mma keychain na Lego iberibe. Echiche bụ iji obere ngọngọ ma ọ bụ mpempe Lego ma mụọ otu akụkụ nke mpempe ahụ iji tinye ọkụ ọkụ. N'ime mgbochi Lego, nke na-abụkarị oghere, anyị na-agbakwunye batrị, eriri na ngbanwe iji mee ka oriọna ahụ dị ọkụ ma ọ bụ. Na nsọtụ ọzọ nke mgbochi anyị nwere ike tinye a yinye na mgbanaka na-enweta ihe mbụ keychain nwere ọrụ abụọ.
Ọrụ mbu a nwere ike wuru onye obula na anyị achọghị itinye ego buru ibu iji nweta nnukwu nsonaazụ na ọbụna oriọna mbụ na-akpụzi ekele maka nrụpụta Lego. Chọghị igwe elektrọnik ọ bụla ma ọ bụ akụkụ siri ike ịchọta, nke a nwere ike ịbụ ihe ịga nke ọma nke ọrụ a.
Owuwu nke igwefoto na Lego iberibe bu ihe di mfe iwuli elu, obu ezie na oru adighi ka onu ahia ma obu aku na uba. N'otu aka ahụ, anyị ga-achọ PiCam, ihe ntụ pi Zero W, batrị na-ewepu ọkụ, ihuenyo lcd na mgba ọkụ. N'otu aka, anyị ga-ezukọ ma kpọkọta ngwa elektrọnik niile na PiCam, emesịa, anyị tinyeziri ndị akpọkọtara n'ime ụlọ e mepụtara na Lego blocks, ụlọ anyị nwere ike ịgbanwe na uto na mkpa anyị, na-ekepụta igwefoto kpochapụwo, igwefoto dijitalụ ọgbara ọhụrụ ma ọ bụ naanị igwefoto Polaroid ochie. Na repository nke Ozizi Ga-ahụ ụfọdụ ihe atụ nke oru ngo na Lego iberibe nke ga-enye gị ohere ịnweta igwefoto dị ike mana ọ nwere ikuku ikuku ma ọ bụ ọbụna mepụta ese foto na-enweghị Lego iberibe.
Robot a na-eme n'ụlọ ma ọ bụ mmiri
O nwere ike bụrụ oru kacha ochie niile ma bụrụkwa nke kachasị sie ike iji rụọ ọrụ Lego. Echiche bụ ịmepụta ụlọ na nkwado maka ígwè ọrụ na-emepụta site na iberibe Lego. Ihe ịga nke ọma abụwo nke ahụ Lego ekpebiela iwuru ọtụtụ ihe ndị ọzọ nwere ụkwụ na-agbakwunye na mgbochi. Nke a na - enye ohere iwulite igwe eji arụ ọrụ igwe na obere pere mpe nwere ike iru ma sonye na igwe agha a ma ama. Mana mmasị Lego nwere na robotik agabigaghị inye ndị na-ewu ụlọ akụkụ ya ebidola ngwa ọrụ ya na ígwè ọrụ ya site na iji Lego iberibe na ihe ndị ọzọ eji akwụ ụgwọ.
N'ihi ya, a na-akpọ kit kachasị ama Lego Uche, a kit na-ezukọta na arụ ọrụ robot na Lego iberibe. Ndabere nke kit a bụ ọnụahịa ya dị elu. Ọnụahịa nke ọ bụghị mmadụ niile nwere ike imeli. Mana nke ahụ apụtaghị na ịnweghị ike iji mpempe Lego maka robots nke gị, dị anya na ya. Tupu ngwa ndị a, ndị mmadụ jiri Lego iberibe ígwè ọrụ ha ma ọ bụrụ na anyị abịa ebe nchekwa ihe Ga-enweta ọtụtụ onwe oru ngo na ike a robot si Lego iberibe.
Onye na-ebi akwụkwọ 3D
3D ebipụtawokwa uru site na mpempe Lego, ọ bụ ezie na ọ bụghị dị ka nke ọma na DIY ụwa ma ọ bụ na robotics. Agbanyeghị, enwere ọrụ na-ewu mpempe akwụkwọ 3D yana mpempe Lego. Obere ihe ịga nke ọma nke ọrụ a, ọbụlagodi ma e jiri ya tụnyere ọrụ ndị gara aga, Ọ bụ n'ihi n'eziokwu na njikọ nke mpempe Lego esighi ike dịka anyị ga-achọ ma mepụta nkwenye na-emetụta mbipụta 3D, na-ekepụta akụkụ ndị ka daa ogbenye.
The ọhụrụ mgbanwe ụfọdụ 3D ebi akwụkwọ kere na Lego iberibe belata nke a kwụsie ike nke ukwuu na e biri ebi iberibe nweta a elu mma.. Na nke a njikọ Nwere ike ịchọta ụfọdụ n'ime ọrụ ndị ahụ na-ejikwa ịbipụta mpempe plastik na usoro ejiri ya rụọ Lego. Ihe kachasị dị iche na nke a bụ na ha nwere ike ịmepụta ọtụtụ Lego, na-abawanye ohere nke ịmepụta ọtụtụ ngwanrọ Ngwaọrụ na Lego iberibe.
Ndi obu nani ha bu oru ngo?
Eziokwu bu na no. Ọganiihu nke Lego iberibe na -adịghị mgbe ha nwere nakwa na ịghara ijikọ ya n'ụdị ma ọ bụ egwuri egwu, nke emere ọtụtụ ndị toro eto echeela maka ụlọ ndị a iji nyere ha aka rụọ ọrụ ngwanrọ n'efu. Enwere ọtụtụ ọrụ enwere ike iji Lego mee ma eziokwu bụ na ọ bụrụ na ị gụọ ndị gara aga, n'ezie ugbu a ị na-eche ịwu otu n'ime ha. Ha niile mara mma nke ukwuu, ọkachasị ọrụ imepụta robọt Not cheghị?
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụrụngwa n'efu » Robotics » 5 Ihe oru ngwanrọ na-akwụghị ụgwọ nke anyị nwere ike iji Lego rụọ
Lorenzo Iago Sansano dijo
Abụ m prọfesọ nke Technology. Agụm a azụtala m ngwa nbipute 3D (Prusa P3 Steel) ma ewebatala m ụmụ akwụkwọ afọ atọ ESO na mbipụta 3D. Ha na-emezi ihe omume TINKERCAD nke ọma na anyị emeela ụfọdụ dị mfe. Echiche m bụ na ha nwere ike iji igwe na-ebipụta ya rụọ rọbọt wee zụta bọọdụ Arduino na ngwa elektrọnik ndị ọzọ.
Ahụla m ụfọdụ ibe weebụ ebe m nwere ike ịhọrọ mana ụmụ akwụkwọ m nwere obere kọmputa ma na m ga-enwe mmasị na ihe dị mfe ma na-arụ ọrụ.
Nwere ike ịkwado m ihe?
Zaghachi Lorenzo Yago Sansano
Daalụ! Ezigbo ozi. Daalụ!